Ramkumar Elan's Page - Media Manch
MaleHetaudaNepal Promote0members promoted this
Blog Posts (5)Discussions (1)EventsPhotos (1)Photo AlbumsVideos Ramkumar Elan's Apps
Ramkumar Elan's Promotions Ramkumar Elan's Friends
View All Ramkumar Elan's Discussions
मकवानपुरका दैनिक पत्रिकाहरु
मकवानपुरको हेटौँडाबाट हाल पाँच दैनिक पत्रिका र एक इन्टरनेट पत्रिका निरन्तर सन्चालनमा छन् ।हेटौँडा सन्देश दैनिक हेटौँडा, मकवानपुर फोनः ०९७७५७५२२२३७ इमेलः…Continue View All
Ramkumar Elan has not received any gifts yet
Ramkumar Elan's Page
Ramkumar Elan shared Binaya Guragain's blog post on Twitterपत्रकारका लागि सोसल मिडियाको प्रयोगApr 2, 2013Ramkumar Elan shared Prakash Lamichhane's page on Twitterपत्रकारले पनि पहिला काम गर्ने-गर्ने अनि छ महिना पुगेपछी तलव पाइन भन्ने होइन।-विनोद ढुंगेलJan 24, 2013Ramkumar Elan promoted Prakash Lamichhane's page पत्रकारले पनि पहिला काम गर्ने-गर्ने अनि छ महिना पुगेपछी तलव पाइन भन्ने होइन।-विनोद ढुंगेलJan 24, 2013Ramkumar Elan's blog post was featuredसूचना सँधै सन्तुलित दिनुपर्छ ।पत्रकार कहिले र कोबाट मारिए?सूचना सँधै सन्तुलित दिनुपर्छ । धेरै पूर्वाग्रही हुँदा 'करिया' भइन्छ क्या ! जनताले पत्याउनेसम्म 'कैरन' गर्नुपर्छ । केही पत्रकारले फेसबुकभरि राज्यबाट बेपत्ता, हत्या गरिएकाको नाम दिए, केहीले विद्रोहीबाट । हामीले सूचना दिन हेडक्वार्टरबाट 'अम्लेख' हुनुपर्छ । मेरो जानकारीमा आएसम्म मुलुकमा बेपत्ता, हत्या भएका सञ्चारकर्मीहरुको विवरण यस्तो छ । बाँकी भए थप्दै जानु होला, हामी पत्रकार हौँ, कसैको भारी बोकेर कतै बौरिने, कतै बहुलाउने गर्नु हुन्न । यी सब घटनाका दोषीमाथि यथाशिघ्र…See MoreJan 15, 2013 0
Tek Raj Bhandari promoted Ramkumar Elan's blog post सूचना सँधै सन्तुलित दिनु पर्छ ।Jan 14, 2013Ramkumar Elan postedablog postसूचना सँधै सन्तुलित दिनुपर्छ ।पत्रकार कहिले र कोबाट मारिए?सूचना सँधै सन्तुलित दिनुपर्छ । धेरै पूर्वाग्रही हुँदा 'करिया' भइन्छ क्या ! जनताले पत्याउनेसम्म 'कैरन' गर्नुपर्छ । केही पत्रकारले फेसबुकभरि राज्यबाट बेपत्ता, हत्या गरिएकाको नाम दिए, केहीले विद्रोहीबाट । हामीले सूचना दिन हेडक्वार्टरबाट 'अम्लेख' हुनुपर्छ । मेरो जानकारीमा आएसम्म मुलुकमा बेपत्ता, हत्या भएका सञ्चारकर्मीहरुको विवरण यस्तो छ । बाँकी भए थप्दै जानु होला, हामी पत्रकार हौँ, कसैको भारी बोकेर कतै बौरिने, कतै बहुलाउने गर्नु हुन्न । यी सब घटनाका दोषीमाथि यथाशिघ्र…See MoreJan 14, 2013 0
Ramkumar Elan postedablog postआँखा अस्पतालमा बलात्कारदेशभर बलात्कारको घटना शृंखला बढिरहेका बेला रौतहटमा आँखा अस्पतालमै सेवाग्राही महिला बलात्कृत भएको घटना सार्वजनिक भएको छ । बलात्कारको घटनामा संलग्न चार कर्मचारीलाई अस्पताल प्रशसनले निलम्वन गरेको छ ।रौतहटको गौरस्थित गौर आँखा अस्पतालमा उपचारमा आएकी भारतीय अस्पतालकै कर्मचारीबाट बलात्कृत भएको घटना सार्वजनिक भएको हो । घटना सार्वजनिक भएलगत्तै अस्पताल प्रशासनले घटनामा संलग्न ४ कर्मचारीलाई निलम्वन गरेको छ । पुरेनवामा रहेको गौर आँखा अस्पतालको टिकट काट्ने कम्प्युटर कक्षमै अस्पतालमा कार्यरत कर्मचारीले…See MoreJan 4, 2013 0
Ramkumar Elan shared their blog post on Facebookअधिकारको खेती र प्रेमबहादुरको पिरतीJan 2, 2013Ramkumar Elan commented on Ramkumar Elan's blog post अधिकारको खेती र प्रेमबहादुरको पिरती"Thanks...."Jan 2, 2013Ramkumar Elan promoted Ramkumar Elan's blog post अधिकारको खेती र प्रेमबहादुरको पिरतीJan 2, 2013MediaManch promoted Ramkumar Elan's blog post अधिकारको खेती र प्रेमबहादुरको पिरतीJan 2, 2013Ramkumar Elan's blog post was featuredअधिकारको खेती र प्रेमबहादुरको पिरतीतमाङ गाउँमै हुर्किएको । बाल्यकालमा मनमा एउटा कुरा खेलिरहन्थ्यो, यी तमाङहरुको पत्नी किन पति भन्दा बढी उमेरका हुन्छन् ? पछि पत्ता लाग्यो, छोरा सानै हुँदा बाबुआमाले नै विवाह गरिदिँदा रहेछन् बढी उमेरका बुहारी । खासमा घरमा काम गर्नका लागि सानो छोरालाई ठूलो बुहारी विवाह गर्ने परम्परा नै रहेछ । जब छोरा बुझ्ने हुन्छ, त्यतिखेर उसका पत्नी शारिरीक रुपमा कमजोर भइसकेको हुन्थ्यो । अनि उसले आफूखुशी भित्र्याउँथ्यो अर्की र सुरु हुन्थ्यो हिंसाको क्रम । र, समाजमा महिलामाथि यसरी हुन्थ्यो हिंसा । तमाङ समाजको यो कथा…See MoreJan 2, 2013 2
MediaManch commented on Ramkumar Elan's blog post अधिकारको खेती र प्रेमबहादुरको पिरती"Very strong argument with justification! "Jan 2, 2013Ramkumar Elan postedablog postअधिकारको खेती र प्रेमबहादुरको पिरतीतमाङ गाउँमै हुर्किएको । बाल्यकालमा मनमा एउटा कुरा खेलिरहन्थ्यो, यी तमाङहरुको पत्नी किन पति भन्दा बढी उमेरका हुन्छन् ? पछि पत्ता लाग्यो, छोरा सानै हुँदा बाबुआमाले नै विवाह गरिदिँदा रहेछन् बढी उमेरका बुहारी । खासमा घरमा काम गर्नका लागि सानो छोरालाई ठूलो बुहारी विवाह गर्ने परम्परा नै रहेछ । जब छोरा बुझ्ने हुन्छ, त्यतिखेर उसका पत्नी शारिरीक रुपमा कमजोर भइसकेको हुन्थ्यो । अनि उसले आफूखुशी भित्र्याउँथ्यो अर्की र सुरु हुन्थ्यो हिंसाको क्रम । र, समाजमा महिलामाथि यसरी हुन्थ्यो हिंसा । तमाङ समाजको यो कथा…See MoreJan 2, 2013 2
Ramkumar Elan postedastatus"@ Mountain TV, News Desk.."Dec 31, 2012 0
Ramkumar Elan postedastatus"एकसाताका लागि पोखरा जाँदै । साथीभाइसँग भेटघाट, छलफल र सहकार्य । अवसर जुटाइदिने नेपाल पत्रकार महासंघलाई धन्यवाद ।"Dec 24, 2012 0
Working journalist in makawanpur more then 10 years...Now in kathmandu since 16 th Magh 2068
Promot and support Journalism Carrier
Ramkumar Elan's Photos
Ramkumar Elan's Blog
सूचना सँधै सन्तुलित दिनुपर्छ ।
Posted on January 14, 2013 at 6:00pm0Comments
पत्रकार कहिले र कोबाट मारिए?सूचना सँधै सन्तुलित दिनुपर्छ । धेरै पूर्वाग्रही हुँदा 'करिया' भइन्छ क्या ! जनताले पत्याउनेसम्म 'कैरन' गर्नुपर्छ । केही पत्रकारले फेसबुकभरि राज्यबाट बेपत्ता, हत्या गरिएकाको नाम दिए, केहीले विद्रोहीबाट । हामीले सूचना दिन हेडक्वार्टरबाट 'अम्लेख' हुनुपर्छ । मेरो जानकारीमा आएसम्म मुलुकमा बेपत्ता, हत्या भएका सञ्चारकर्मीहरुको विवरण यस्तो छ । बाँकी भए थप्दै जानु होला, हामी पत्रकार हौँ, कसैको भारी बोकेर कतै बौरिने, कतै बहुलाउने गर्नु हुन्न । यी सब… Continue आँखा अस्पतालमा बलात्कार
Posted on January 4, 2013 at 5:25pm0Comments
देशभर बलात्कारको घटना शृंखला बढिरहेका बेला रौतहटमा आँखा अस्पतालमै सेवाग्राही महिला बलात्कृत भएको घटना सार्वजनिक भएको छ । बलात्कारको घटनामा संलग्न चार कर्मचारीलाई अस्पताल प्रशसनले निलम्वन गरेको छ ।
रौतहटको गौरस्थित गौर आँखा अस्पतालमा उपचारमा आएकी भारतीय अस्पतालकै कर्मचारीबाट बलात्कृत भएको घटना सार्वजनिक भएको हो । घटना सार्वजनिक भएलगत्तै अस्पताल…
Continue अधिकारको खेती र प्रेमबहादुरको पिरती
Posted on January 2, 2013 at 10:30am2Comments
तमाङ गाउँमै हुर्किएको । बाल्यकालमा मनमा एउटा कुरा खेलिरहन्थ्यो, यी तमाङहरुको पत्नी किन पति भन्दा बढी उमेरका हुन्छन् ? पछि पत्ता लाग्यो, छोरा सानै हुँदा बाबुआमाले नै विवाह गरिदिँदा रहेछन् बढी उमेरका बुहारी । खासमा घरमा काम गर्नका लागि सानो छोरालाई ठूलो बुहारी विवाह गर्ने परम्परा नै रहेछ । जब छोरा बुझ्ने हुन्छ, त्यतिखेर उसका पत्नी शारिरीक रुपमा कमजोर भइसकेको हुन्थ्यो । अनि उसले आफूखुशी भित्र्याउँथ्यो अर्की र सुरु हुन्थ्यो हिंसाको क्रम । र, समाजमा महिलामाथि यसरी हुन्थ्यो हिंसा । तमाङ समाजको यो… Continue सूचनाको हक बन्दैछ पत्रकारको असुरक्षाको कडी
Posted on December 11, 2012 at 4:30pm 1 Comment
–एबिसी टेलिभिजनका लागि हेटौंडामा कार्यरत कृष्ण सारु हेटौँडा नगरपालिकाले सूचना उपलब्ध नगराएको भन्दै पुनरावेदन अदालतमा मुद्दा हाल्न पुगे ।–सिन्धुपाल्चोकका पत्रकार दिनेश थापा अदालतमा तीनवटा मुद्दा खेपिरहेका छन् । तिब्बतीलाई नागरिकता दिने काम गर्ने गाविस सचिव नवराज सेन, उर्गेन लामा र अधिवक्ता मधुकर मल्लले अदालतको मानहानी गरेर समाचार छापेको भन्दै उनीमाथि मुद्दा हाले र सिन्धुपाल्चोकका डिएसपी प्रतापकुमार गुरुङले समाचारको स्रोत चाहियो भन्दै प्रहरी कार्यालय बोलाएर धम्काए ।–बारामा आफू… Continue AddaBlog Post